ကူးစက်ရောဂါများ » လေထဲမှတဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါများ
ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ် က အမျိုးအစားတွေ အများကြီး ရှိပြီး လူမှာတော့ ၈မျိုး ကူးတတ်ပါတယ်။သာမန်အရည်ကြည်ဖုကနေ ကင်ဆာရောဂါအထိ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကူးစက်ရောဂါများ, ရေယုန် ဇန်နဝါရီ 15, 2021 .2mins read
လေထဲကနေ ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေက အဖြစ်များပါတယ်။ အကူးလည်း လွယ်ပါတယ်။ တချို့ရောဂါတွေဆို အသိနောက်ကျရင် အသက်အန္တရာယ်ရှိတတ်ပါတယ်။
ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ, ကျန်းမာရေးစင်တာ ဇန်နဝါရီ 9, 2021 .3mins read
နှလုံးပိုးဝင်ခြင်းက ၃မျိုးရှိပေမယ့် လက္ခဏာလေးတွေက ခပ်ဆင်ဆင် လက္ခဏာတစ်ခုခုကို ရုတ်တရက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရပြီဆိုရင် မပေါ့ဆဘဲ ဆေးစစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
နှလုံးရောဂါ, ကျန်းမာရေးစင်တာ ဒီဇင်ဘာ 24, 2020 .3mins read
ကာကွယ်ဆေးက ကမ္ဘာပေါ်က ကြောင်စရာကေင်းတဲ့ ရောဂါတွေကို အပြီးတိုင် ပျောက်ကွယ်သွားအောင် သုတ်သင်ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းထက် ဆေးဝါးတစ်မျိုးပါ။
ရင်နှစ်သည်းချာ ဖေဖေမေမေတို့ကမ္ဘာ, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ဒီဇင်ဘာ 24, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇန်နဝါရီ 29, 2021 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇန်နဝါရီ 29, 2021 .4mins read